Ny foibe angon-drakitra voalohany an'ny Apple ao Shina dia manomboka miasa amin'ny fomba ofisialy | Avy amin'ny mac aho
Apple dia nanomboka niasa tamin'ny fomba ofisialy tao ny ivon-kevitrao voalohany any Sina telo taona mahery taorian'ny nanombohany nanangana ilay toerana hanaovana tahiry ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny sisintanin'ny firenena.
Ny ivon-kevitra, any amin'ny faritany atsimo andrefan'ny Guizhou, nanomboka niasa tamin'ity herinandro ity, hoy ny gazety teo an-toerana. Ny foibe angon-drakitra dia hampiasain'ny Guizhou-Cloud Big Data (GCBD) ary hampiasaina hitahiry angona iCloud avy amin'ny mpanjifa sinoa manerana ny firenena. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fanjakana XinhuaNet, ny foibe angon-drakitra "hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa sinoa amin'ny resaka hafainganana sy ny fahamendrehana amin'ny serivisy."
Apple koa dia manomana foibe angon-drakitra faharoa ao an-tanànan'i Ulanqab ao amin'ny faritra mitokana Mongolia. Tamin'ny 2016, nandany lalàna vaovao momba ny fiarovana an-tserasera ny governemanta Shinoa izay hanery an'i Apple hitahiry ny angon-drakitra ho an'ny mpizara eo an-toerana. Ny taona manaraka dia nanao sonia fifanarahana tamin'ny governemanta Guizhou i Apple hanombohana ny fananganana ivon-tahiry voalohany ao amin'ny firenena.
Voarara ny lalàna amerikanina amin'ny famoahana data any amin'ny manampahefana sinoa. Na izany aza, ao anatin'ny fifanarahana nifanaovany tao amin'ny firenena, GCBD no tompon'ny data iCloud iCloud any China. Io dia ahafahan'ny manampahefana sinoa mitaky angona avy amin'ny telco fa tsy amin'i Apple.
Izay lazaina amin'ny teny anglisy hoe Win-Win. Samy mandresy. Sina sy Apple. Ny voalohany amin'ny fitahirizana angona eo an-toerana sy ny fahazoana miditra haingana kokoa. Apple dia manamafy ny fifamatorana amin'ny superpower ary koa manana ny angon-drakitra amin'izany tontolo izany ary manakaiky ireo mpampiasa dia mahazo mora sy mampihena ny vidiny. Izay jerenao dia mandresy amin'ity lalao ity foana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Manomboka miasa amin'ny fomba ofisialy ny ivon-tahiry voalohany an'ny Apple ao Shina